ELEVEN MEDIA GROP မှ သတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ELEVEN MEDIA GROP မှ သတင်း
ELEVEN MEDIA GROP မှ သတင်း
Posted by နေ ဘုန်းလျံ on Jul 1, 2010 in News |4comments
မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမှာ ခေတ်ကိုရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီး ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုပျောက်တော့မယ့်အဖြစ်ကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဖူး ခေတ်ဘယ်လိုတိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါစေ ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကိုတော့ အတက်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းရမှာက ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူငယ်တွ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ တာဝန်ပါ ကိုယ့်ရိုးရာကို ကိုယ်မထိန်းသိမ်းရင် ဘယ်သူလာထိန်းသိမ်းမှာလဲ ဗျာ
အခုနောက်ပိုင်းထီဆိုင်ကလုပ်တဲ့ဂုဏ်ပြုပွဲတွေမှာဆိုလည်း ၀တ်ထားတာမမြင်ချင်မှအဆုံးပဲ ။ကိုယ့်အဆင့် ဘယ်လောက်ကျသွားလဲဆိုတာသတိမထားမိပဲ အိုက်တင်ကြီးပေးပြီးထိုင်နေတာ လူရယ်စရာတောင်ကောင်းတယ်။
ခင်ဗျားတို.ကြည့်ဘူးကြလားမသိဘူး……. MRTV-4 က
FMF ဆိုတာကို………. သူကပိုဆိုးသလားလို.ဗျ……… မင်းသမီးတွေဝတ်ထားတာကတော့
အပျံစားတွေကြီးပဲ ……… နောက်တော့ဆင်ဆာဖြတ်တယ်လေ ။
ကျုပ်အမြင်ပြောရရင်တော့ မလွှင့်ခင်ကတည်းက ၀တ်စားဆင်ယင်မှုကို ကြိုပြီးတော့သတိပေးထားသင့်တယ် ။
ဟော…..လွှင့်လဲလွှင့်ရော အဖြုကွက်တွေကော……စပေါ့တွေကော….စုံနေတာပဲ ။ နောက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်..
Sponsor ပေးတဲ့ကုန်ပဏီက ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းကို လဲဆင်ဆာဖြတ်သေးတယ်ဗျ ….. သူကဘာတွေထုတ်ပြီးတော့
ဘာတွေကြာ်ငြာလို.လဲမသိပါဘူးဗျာ……ကြည့်ရတာရှုပ်နေတာပဲ …… ဘာပဲပြောပြော အခုခေတ်မိန်းကလေးအ၀တ်အစားတွေက
ငါတို့ ယောင်္ကျားတွေကို ဘာထင်တာလဲ
အမျိုးသမီးရေးရာက၀င်မှာလား? ခုတော့ အိပ်ချင်ဆောင်လိုက်အုံး
စထဲက သူတို့က ကမြင်းပြီးစိမ်ခေါ်နေကြတာ